Home » အသားပေး » Q & A: Brett Ineson, Animatrik သမ္မတ
Q & A: Brett Ineson, Animatrik သမ္မတ
Warcraft - စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဖမ်းယူစတူဒီယို Animatrik ၏ဥက္ကဋ္ဌနှင့် CTO ဖြစ်သူကို virtual ထုတ်လုပ်မှုအားထုတ်မှုအစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်အကြီးဆုံးစကေးပေါ်တွင်အလုပ်ဆြေးြေိံး
ငါဆယ်အနှစ်အရွယ်ကြီးပြီးကတည်းကငါကာတွန်းအကြောင်းကိုအသည်းအသန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့မိဘတွေကသူတို့တိုရွန်တိုအတွက်အနုပညာနွေရာသီစခန်းမှအကြှနျုပျကိုစလှေတျတျောဒါ, ငါ့ကိုစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ထင်သောဘဝဒေသများအအေးငါ့ကိုဖော်ထုတ်ရန်စိတ်အားထက်သန်ခဲ့ကြသည်။ တိုက်ရိုက်လွှလူများနှင့်ရေးဆွဲအတူစမ်းသပ် - ကျနော်တို့ flipbooks ကပ်. ရပ်တန့်အဆိုကိုများအတွက် 8mm ကင်မရာများအသုံးပြုကြသည်ရှိရာကာတွန်းနဲ့ TV ထုတ်လွှင့်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့ငါ၏အလမ်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကာတွန်းနှင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံနှစ်ဦးစလုံးနှင့်ပတ်သက်ပြီးအသည်းအသန်, ငါ၏မိခင်နှင့်အဖေတကယ်စက်မှုလုပ်ငန်းမှငါ့ကိုမဖော်ထုတ်ကူညီပေးခဲ့သည်။ ငါအစဉ်အမြဲငါအထက်တန်းကျောင်းသို့သှားကွ၏ရှည်လျားသောရှေ့တော်၌အထက်တန်းကျောင်းအဆင့်ကို programming ကိုပညာရေးခဲ့ကြတယ်! ကျွန်မတက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရပြီးနောက်ငါသည်သူတို့၏ 3D အစီအစဉ်အတွက်ဗန်ကူးဗားရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကျောင်းပိတ်ထားသွားလေ၏။
ငါဘွဲ့ရများနှင့်ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးအစဉ်အဆက် 3D ကာတွန်းတီဗွီရှိုး Reboot အလုပ်လုပ်, Mainframe အတွက်ဖျော်ဖြေမှုမှာကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးအလုပ်ဆင်းသက်ခဲ့သည်။ အကြီးတန်းနည်းပညာဆိုင်ရာဒါရိုက်တာ Mainframe အတွက်၏အခန်းကဏ္ဍကိုမှတက် Moving မကြာမီများအတွက်ပြပွဲဆိုက်ရောက် Sony က Entertainment ကအကြီးစားဂီယာကိုခေါ်။ ပြပွဲများအတွက်အဓိကလိုအပ်ချက်တစ်ခုမှာရွေ့လျားမှုဖမ်းမိခဲ့သည်။ ဒီကတဆင့်ကျွန်မနည်းပညာဗတ္တိဇံကိုပထမဦးဆုံးကလူတဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။ ငါကချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်ကျဆင်းခဲ့သည်။
အဘယ်ကြောင့်သင် Animatrik start ခဲ့တာလဲ
ငါရွေ့လျားမှုဖမ်းကင်မရာ၏ထုတ်လုပ်သူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့အတိတ်မှာတော့သူတို့ကိုငါပို့လိုက်ကြတယ်အများကြီးတက်သည်ကိုတင်ထားရန်ကူညီပေးနေခဲ့သည်။ ငါ ad hoc အခြေအနေများတွင်ရွေ့လျားမှုဖမ်းယူအဆင့်ဆင့်ကိုတက် setting မှာကယ့်ကိုအကောင်းဖြစ်လာခဲ့သည်သို့သော်ဤကျွမ်းကျင်မှုလည်းအများကြီးခရီးသွားလာဆိုလိုသညျ။ ကျွန်မအနည်းငယ်လွတ်လပ်ရေး၏မျက်နှာသာအတွက်ပေါ်ပြောင်းရွေ့နဲ့ကျွန်မကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖီဂျီ, အီတလီ, နယူးဇီလန်နဲ့တူသောနေရာများအတွက်ရွေ့လျားမှုဖမ်းယူအလုပ်လုပ်နေတာတွေ့များနှင့်သင်တန်း Los Angeles မြို့။ ငါတကယ်အချို့သောမြစ်များကိုစိုက်စေချင်ကြောင်းအချိန်ရှိတယ်ရောက်လာတယ်။ ငါဗန်ကူးဗားများတွင်အခြေချဒီမှာကြီးထွားလာစက်မှုလုပ်ငန်းအစေခံဖို့ကျွန်မကိုကူညီဖို့ Animatrik ဖွင့်လှစ်။
Animatrik ရဲ့အလွန်ပထမဦးဆုံးစီမံကိန်းကဘာလဲ ထိုအရာကိုသင်အရှိဆုံးစိန်ခေါ်?
ပထမဦးဆုံးစီမံကိန်းကခရိုင်9ခဲ့ပေမယ့် Warcraft ကျိန်းသေအရှိဆုံးစိန်ခေါ်မှုပဲ! ဒါဟာအစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်အကြီးဆုံးစကေးကို virtual ထုတ်လုပ်မှုကြိုးစားအားထုတ်မှုခဲ့, ငါထုတ်လုပ်မှုနဲ2အပေါ်စတင်သည်သည်အထိဖြစ်တည်နေကြလိမ့်မည်ထင်ပါတယ်။ ဒါဟာတကယ်နည်းပညာအလွန်လျင်မြန်စွာတိုးတက်နေသည်အထူးသဖြင့်အခါ, ဒီ field ရဲ့ထိပ်မှာတစ်ဦးကောင်းသုံးခုသို့မဟုတ်လေးခုတစ်နှစ်ပြေးရှိသည်ဖို့သင့်ရဲ့စီမံကိနျးအတှကျစိန်ခေါ်ပါတယ်။
ငါထကြီးထွားလာကင်မရာများများအတွက်စိတ်အားထက်သန်ခဲ့, ပင်နေဆဲဓာတ်ပုံများတွင်ကင်မရာလက်ထောက်အဖြစ်အလုပ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ motion ဖမ်းယူအတူတကွကွန်ပျူတာသိပ္ပံ, ကာတွန်းနှင့်ကင်မရာများရောစပ်အကြောင်း, ဒါကြောင့်ငါတဦးတည်းသွားလာရင်းအတွက်ငါ့အလိုရှိသမျှကိလေသာကိုလိုက်နာနိုင်ခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ဝယ်လိုအားအဆက်မပြတ်ကြီးထွားလာကြည့်ပါ။ ဒါဟာကျနော်တို့အနေနဲ့သရုပ်ဆောင်များ၏အနှစ်သာရမှတ်တမ်းတင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့တော့ဘူးရွေ့လျားမှုဖမ်းယူကမခေါ်ပါဘူးတဲ့အဆင့်ကိုကျနော်တို့စွမ်းဆောင်ရည်ဖမ်းခေါ်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အနာဂတ်မှာအသေးဆုံးခန္ဓာကိုယ်အသေးစိတျကူး iterating အကြောင်း, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကသရုပ်ဆောင်မအရာကိုဟုတ်မှန်အဲ့ဒီအချိန်မှာကြောင့်ပိုပိုပြီးဒေတာစုဆောင်းနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီမှာဒီ commoditize ကြောင့်ထွန်းသစ်နည်းပညာများဖြစ်ကြောင့်စျေးသက်သာစေပေမယ့်အားလုံး photorealism မှ resolution နဲ့သစ္စာတွေအကြောင်းလည်းပေါ်ထွက်လာနည်းပညာများရှိပါတယ်လိမ့်မယ်။
performance ဖမ်းမိသေးငယ်တဲ့, နယ်ပယ်စက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ ပစ်မှတ်ထားဖို့ကုမ္ပဏီကိုရှာပါ။ တချို့ကအလုပ်သင်အစီအစဉ်များရှိစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်အခြားမည်သည့်ထုတ်လုပ်မှု-based အလုပ်တူ, သင်၌တစ်စုံတစ်ရာလမ်းကိုရှာဖွေရှိသည်!
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2017-05-22
ယခင်: ပြည်တွင်းအဖြစ်တူစီမံကိန်းအင်ဂျင်နီယာ, ဗီဒီယိုသိမ်းယူမှု & Compression ကို
နောက်တစ်ခု: Cinegy နှင့်အတူလေထုအပေါ်သြစတြီးယားသတင်းရုပ်သံလိုင်း OE24 တီဗီ
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "Q & A: Brett Ineson, Animatrik သမ္မတ" ။ http://www.broadcastbeat.com/qa-brett-ineson-president-of-animatrik/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။